Yakanakisisa Inoraswa PVC Vinyl Examination Grovhosi Mugadziri uye Fekitori |Red Sunshine
Puncture & Kubvarura Yemahara - Yakakora yakajeka purasitiki kudzivirira kubvarura uye kuboora asi yakakwana kutambanudza kwemunwe kuchinjika.
Chivharo Chakasimba - Kwekicheni kana kuchenesa, magurovhosi aya anopa chipingamupinyi kubva kumakemikari, kunhuhwirira nezvimwe.
Yakakwana Ambidextrous Fit - Inokodzera zvakanaka nerudyi neruoko rweruboshwe kudzivirira kuvhiringidzika.
Multi-Purpose - Poda-yemahara magurovhosi, makuru sechikafu magurovhosi, kuchenesa magurovhosi, magurovhosi ekuchengetedza, chikafu chekugadzirira magurovhosi uye zvimwe zvakawanda.
Magurovhosi ePVC anoraswa magirovhosi epurasitiki anoraswa, ayo ndiwo anokurumidza kugadzirwa muindasitiri yemagirovhosi ekudzivirira. Vashandi vezvehutano nevanopa basa reindasitiri yezvekudya vanofarira magirovhosi ePVC nekuti akasununguka kupfeka uye anochinjika kushandisa.Izvo hazvina chero latex yakasikwa uye hazvikonzerese kusawirirana.
Kusununguka kupfeka, kupfeka kwenguva refu hakuzokonzeri kuomarara kweganda.Zvakanakira kutenderera kweropa.
Usave nemaamino compounds uye zvimwe zvinokuvadza, kashoma kuburitsa allergies.
Kusimba kwakasimba kusimba, kupuncture kuramba, kwete nyore kukuvadza.
Kuvhara kwakanaka, kunonyanya kushanda kudzivirira guruva kubuda.
Superior chemical resistance, kuramba kune imwe ph.
Silicon yemahara, ine zvimwe antistatic zvivakwa, inokodzera zvemagetsi indasitiri yekugadzira zvinodiwa.
Masara emakemikari epamusoro, yakaderera ion zvemukati, zvimedu zvemukati, zvakakodzera kune yakasimba isina guruva-isina kamuri nharaunda.
Basa remumba, zvemagetsi, makemikari, aquaculture, girazi, chikafu uye kumwe kuchengetedza fekitori, zvipatara, tsvagiridzo yesainzi uye mamwe maindasitiri anoshandiswa; Inoshandiswa zvakanyanya mu semiconductor, chaiyo yemagetsi zvikamu uye kuisirwa kwechiridzwa uye kushanda kwemidziyo yesimbi inonamira, yakakwirira-tech chigadzirwa kuisirwa uye. debugging, disc actuators, composite materials, LCD kuratidza matafura, redunhu bhodhi kugadzira mitsetse, optical zvigadzirwa, marabhoritari, zvipatara, runako salon uye mamwe minda.
Nzira yekugadzirwa kwechigadzirwa
Kuongorora zvinhu zvakasvibirira → kugamuchirwa → kusanganisa → kuona → kusefa → kudhirowa chengetedzo → kuona → kushandiswa pamhepo → kunyura → kudonhera pasi → kuomesa → kuumba plasticizing → kutonhora → kupinza PU kana hupfu hwakanyorova → kudonha kwakamira → kudonha → kuomesa → kutonhora → kutonhora → kutonhora pre-kukurura → demudding → vulcanization → kuongorora → kurongedza → kuchengetera → kuongorora kwekutumira → kurongedza kutumira.
Zvakapfuura: Leather Oven Heat Resistant BBQ Gloves High Temperature 800 Degrees Barbecue Grill Leather Gloves
Zvinotevera: Yakachikwa palm half lined mombe yakatsemurwa inoshanda yakachipa yematehwe girovhosi
Kuchenesa Mumba Latex Magurovhosi Kicheni Dishwas...
Reusable Kuchenesa Magirovhosi Akawedzera Makobvu Rubber...
Yakasimba PPE Yekuchenesa Grovu Reusable Kitchen Dis...
Fekitari Inopa Maviri Mavara Akasanganiswa Workin...
Latex Yemhuri Yakakungurutswa Cuff Magirovhosi mapfupi rabha...
Hunhu Hwakanaka Hwakareba Cuff Pvc Latex Magurovhosi eHou...